तिथि मेरो पत्रु » 10 महिला लागि डेटिङको आज्ञा
डेटिङ गर्दा कुनै पनि नियम छन्? पक्कै छन्. तिनीहरूलाई को लट, वास्तवमा, तर अधिकांश संस्कृति वातानुकूलित छन् र तिनीहरूले एक देश देखि अन्य र एक जातीय समूह देखि अन्य भिन्न हुन सक्छन्. तथापि, सबै संसारभरि वैध रहने आधारभूत नियम छन्. यहाँ छन् 10 डेटिङ गर्दा आज्ञा महिलाहरु आदर गर्नुपर्छ:
1. फिर्ती समय मा कल
उनलाई रुचि देखिन्छ जो मान्छे गर्न फर्किरहेका अघि आफ्नो समय निकालेर जस्तै महिला. त्यस मानिसले चासो छ भने, पनि, तपाईं एक समय मा आफ्नो कल फर्कनेछु. तपाईं प्राप्त गर्न कठिन खेल्न चाहनुहुन्छ भने पनि, यो भन्दा प्राप्त गर्न प्रयास 48 एक राम्रो कारण बिना घन्टा सीमा. शहर बाहिर हुँदा अब एक वैध विवरण छ. सबैजना आजकल एक मोबाइल फोन छ, वा लगभग सबै.
2. तपाईंको प्रतिज्ञाहरू आदर
तपाईं यो भन्दा जङ्गली डेटिङ जंगल महिलाको मानिसहरूका लागि सजिलो छ भन्ने सोचाइ हुन सक्छ. यो विश्वास वा छैन, यो साँचो होइन. यो एक महिला बाहिर सोध्न साहस प्राप्त गर्न सधैं सजिलो हुँदैन. उनले त्यो भने, र तपाईं जनाउनुभयो, आफ्नो योजना लीन प्रयास. बस अन्तिम मिनेटमा रद्द गर्न फोन मत. उहाँले तिनलाई मा कि धेरै छैनन् छाप प्राप्त हुन सक्छ. खैर, यो बिल्कुल ठीक छ नहुन, तर यस्तो अवस्थामा तपाईं पहिलो ठाँउ मा सहमत हुँदैन.
3. उहाँलाई नेतृत्व होस्
यो तपाईंको लागि जमानाको पनि पुराना लाग्छ? धेरै कुराहरू अझै पनि पुराना स्कूल तरिका गरिन्छ कि तपाईं बाहिर देखेर छक्क हुन सक्छ. अधिकांश पुरुषहरु शिकारी रमाउँछु, कम से कम एक सानो बिट. आफैलाई शिकार गरौं, आवश्यकता उहाँलाई सही संकेत पठाएर हुन भने तर उसलाई मदत.
4. कुनै प्रस्थान भाषणको
आफ्नो गर्लफ्रेन्ड संग एक चिट च्याट लागि यो विषय छोड! बालिका बीच एक पेय आफ्नो पूर्व बारेमा कुरा गर्न अझ उपयुक्त परिस्थिति छ. यो बारेमा गुपचुप नभई, तपाईंको सम्बन्ध पहिलो चरण को समयमा आफ्नो सबै muddied पछिल्लो पर्दाफास छैन.
5. आफ्नो ध्यान केन्द्रित र हाँस्न
एक मुस्कान बढी बनाउन को एक टन भन्दा लायक छ. यो आफ्नो अनुहार चम्काउन बनाउँछ र आफ्नो क्षमता प्रेमी तपाईं को सबै भन्दा राम्रो हेर्छन्. एक मिति छँदा, उहाँलाई आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्ने प्रयास, र अन्य मान्छे पछि आफ्नो टाउको मोड जोगिन, कुनै कुरा तिनीहरूले कसरी हुन सक्छ तातो. उहाँले गर्नुपर्छ के सुन्नुहोस्, आँखा सम्पर्क कायम, र आकर्षक हुन. त्यो मानिस आशा मनोवृत्ति छ. तपाईं तीतो हुन्छ भने, विचलित, र दुःखी, उहाँले त्यस पछि बोलाउन बिर्सनु सक्छ.
6. धेरै पिउन नगर्नुहोस्
वातावरण खुकुलो र आकस्मिक छ. सबै बस ठीक काम गरिरहेको देखिन्छ. तपाईं केही ककटेल वा रक्सी को चश्मा छ प्रलोभनमा महसुस. के छैन! कसैले तपाईं मादक पेय पदार्थ छुन अनुमति छैन भन्छन्. बस यो ज्यादा छैन. परिणाम तपाईं विचार रूप सेक्सी हुन सक्छ.
7. एक सुन उत्खनन गर्ने जस्तो देखिँदैन गर्नुहुन्छ
तपाईं के रुचाउनुहुन्छ, आफ्नो soulmate भेट्टाउनु, वा अस्थायी वित्त पोषण स्रोत. उहाँले आफ्नो बैंक छ भने व्यवहार नगर्नुहोस्. उहाँले तपाईंलाई लागि वर्तमान किन्न निर्णय भने, यसलाई स्वीकार, तर यसको लागि सोध्न छैन. यसबाहेक, आफ्नो किराया तिर्ने उहाँलाई सहमत छैन, वा तपाईं मुद्रा को एक मासिक राशि दिने उनले आफ्नो प्रेम खरीद जस्तै महसुस गर्न अन्त हुन सक्छ रूपमा.
8. एक महिला हुनुहोस्
तपाईं एक बच्चा थिए जब आफ्नो आमाबाबुले तपाईंलाई सिकाउनुभयो व्यवहार को मूल नियम सम्झना? डेटिङ गर्दा तिनीहरूले अझै पनि लागू. आफ्नो बेहोरा बिर्सन र बहुमूल्य शब्दहरू प्रयोग नराख्नुहोस् र तपाईं पहिले नै उहाँलाई थाहा पनि भने "धन्यवाद" "कृपया". आफ्नो आसन मन र तपाईं लगाएका प्यान्ट हो भने पनि एक मित्र जस्तै खुला आफ्नो खुट्टा फैलाउन छैन. एक परिष्कृत महिला पनि विवाहको वर्ष पछि यी साना आधारभूत नियम बारे बिर्सनुहुन्न.
9. आफ्नो चासो देखाउन
आफ्नो मान्छे दिंदा एक प्रशंसा केहि महिलाहरूलाई गर्दै बिर्सन छ. पुरुष हामीलाई रूपमा राम्रो शब्द र इशाराहरू बस को रूप संवेदनशील छन्. उहाँले तपाईंको लागि विशेष गरी धारण कि नयाँ शर्ट मा ठूलो देखिन्छ कि उहाँलाई बताउन नहिचकिचाउनुहोस्. उहाँलाई लागि राम्रो कुरा गरेर आफ्नो चासो देखाउन! उहाँले खाने बाहिर जान्छ? तपाईं किन परिवर्तन लागि एक घर बनाएको खाने को लागि आफ्नो ठाउँमा उहाँलाई निमन्त्रणा छैन? तपाईं आफ्नो मनपर्ने कुकीहरू थाह? नुस्खा लागि हेर र उहाँलाई लागि एक राम्रो समूहमा सेंकना. यी जस्तै सरल हाउभाउ एक सन्देश पठाउन. तिनीहरूले तपाईंलाई हेरचाह भनी देखाउने र तपाईं प्रयास गर्दै छन् कि, पनि.
10. पहिलो मिति मा नाङ्गो प्राप्त छैन
पहिलो नजर मा प्रेम? धेरै मानिसहरू यो बस मोह छ भन्ने बहस हुनेछ. तर, तपाईँलाई तपाईं प्रत्येक अन्य मा आँखा सेट पहिलो पटक देखि प्रेममा फसे भन्छन् र यो पारस्परिक छ. तथापि, पहिलो मिति मा नाङ्गो रही नगर्न प्रयास. तपाईं चुम्बन र अँगालो सक्छ, तर यो सधैं को धीमा लिएर आफ्नो फाइदा छ. तपाईं प्रेम बनाउन र बस सेक्स कुरा हुनेछ कसरी अरू?
सुस्त पहिलो डेटिङ भन्न